Wordpress မှာ flash ကို ထည့်ရန် ?? — MYSTERY ZILLION
Wordpress မှာ flash ကို ထည့်ရန် ??
Template ထဲက နေ index.php မှာ dreamweaver ပုံစံအတိုင်း Flash ထည်သုံးတာ အဆင်တော့ချောတယ် ခက်တာကို ပုံတွေရဲ့ loading time ကအရမ်းကိုနှေးနေတယ်။
Flash ကို url loader တွေသုံးကာ external photo ကို loading လုပ်တာပါ။
(sorry for my myanmar language I am still trying to use Myanmar3font but i am being trouble to use
Loading က connection နဲ့ ဆိုင်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် localhost မှာ စမ်းရင်တော့ မနှေးပါဘူး။ သာမာန် HTML မှာကော loading time မြန်သလား ?
ဟုတ်ကဲ့ localhost မှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ မြန်လည်းမြန်ပါတယ်။<div>online လည်းရောက်ရော တခါကြည့်တိုင်တစ်ခါ ဆိုသလိုပြန်ပြန် ပုံတွေကို ပြန်ပြန်တင်နေတဲ့သဘောနဲ့</div><div>ကြာကြာနေလို့ပါ။</div><div><br></div><div>flash ကိုထည့်ရာမှာတော့ dreamweaver ပုံစံအတိုင်းထည့်ထားတာပါ။</div><div><br></div>
ဟုတ်ကဲ့ localhost မှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ မြန်လည်းမြန်ပါတယ်။<div>online လည်းရောက်ရော တခါကြည့်တိုင်တစ်ခါ ဆိုသလိုပြန်ပြန် ပုံတွေကို ပြန်ပြန်တင်နေတဲ့သဘောနဲ့</div><div>ကြာကြာနေလို့ပါ။</div><div><br></div><div>flash ကိုထည့်ရာမှာတော့ dreamweaver ပုံစံအတိုင်းထည့်ထားတာပါ။
it's problem of your connection. Don't use big image size in flash. It will take loading time too much.</div>
Optimize your jpg. Pull from CDN, not from your host. Keep all you image in different subdomain or CNAME. Use LiteSpeed or Nginx. Try to extend your image files cache age.
Try to extend your image files cache age.
You can edit in .htaccess .. if you are using wordpress , use w3 total cache ..
ကျွန်တော် wordpress ရဲ ့header ကို Flash ထည့်ချင်လို အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေတယ်...
manual ဆွဲထားတဲ့ဆိုဒ်မှာ ထည့်ရင်အဆင်ပြေပြီး.......
wordpress ထဲမှာ ထည့်လိုက်ရင်... လုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူး.
wordpress ထဲမှာထည်ထာ header.php ထဲမှာ သွားထည့်တာပါ..
အဆင်မပြေဘူး ..Flash .swf file ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး....